MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA MAMMUT BULLDOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Mammut Bulldog iyo Sawirro
Mammoths Horse Power Mammut Bulldog da'da 3 sano
Madaxa qaab-goobeedku waa dherer dhexdhexaad ah oo leh xuubka dhawaaqa. Waxay leedahay qalfoof ballaaran iyo lafo dhabanno lagu dhawaaqay. Dhegaha kor baa loo taagay. Dhammaan noocyada dhegaha waa la oggol yahay. Sanka waa madow, bunni ama beer midab leh waxay kuxirantahay midabka. Indhaha ogadu waa madow yihiin. Afku waa laba jibbaaran, ballaadhan yahay oo qoto dheer leh muuqaal xoog leh iyo duulimaadyo la hagaajiyay. Waxay leedahay shaashad hoosaad ama maqas qaniinyo mana leh cillad ilkaha ka jaban. Qoorta ayaa muruq ah, waxyar ka garabka garabka ilaa madaxa, waa la taabanayaa waana ka madhan tahay maqaarka dabacsan ee cunaha. Laabta ayaa qoto dheer feeraha xidhan. Bawdyaha waa cabir dhexdhexaad ah oo leh muruqyo si wanaagsan loo soo saaray, kala-goysyada leh ciqaab sax ah (qiyaastii 30 darajo), iyo is barbar socda. Kala-goysyadu si siman ayay u foogan yihiin laakiin aan si weyn loo dhisin. Dhabarka ayaa xoog leh oo leh curuq yar oo foorara iyo diiqad yar oo ka dambeysa qallaylka. Dabada ayaa hoos loo dhigay, oo gaadhaysa hocks, oo loo oggol yahay dhammaan noocyada, laakiin dabo toosan oo aan dhammaystirnayn oo aan lahayn biinno ayaa la door bidaa. Dabo bidaar leh ama cilladaysan ayaa kuxiran, laakiin taranka lama beddeli karo si kale (dheg jalaq looma siidaayo ama dheel tiris la'aan). Dharka dhaadheer ee dhaadheer ayaa qaro weyn oo badanaa wuxuu u muuqdaa sidii baalal dhegaha, dhabarka lugaha iyo dabada. Dhammaan midabada jaakadda waa la oggol yahay, laakiin eeyaha cad ee saafiga ah ayaa laga reebay taranka.
Mammut Bulldog waa aamin, geesinimo iyo cabsi la'aan. Waa kalsooni iyo caqli leh dabeecad adag. Noocani wuxuu leeyahay ugaarsi dhexdhexaad ah oo sareeya. Waxay ku fiicantahay isboorti badan waxayna sameysaa eey shaqeynaya oo wanaagsan, laga soo bilaabo kacsanaanta ilaa tababarka ilaalinta iyo wixii ka dambeeya. Waa eey qoys fiican oo sameeya wehel wanaagsan. Noocani wuxuu ku fiican yahay carruurta. Waxay leedahay dulqaad xanuun badan. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay qaataan go'aan go'an, iswaafaqsan, kalgacal leh inta ay isdejiyaan. Haddii eeyga dareemo inaad tahay wuu ka itaal daranyahay isaga , wuxuu noqon doonaa madax adag, maadaama uu aamminsan yahay inay shaqadiisu tahay inuu guriga maamulo. Waxay u sameeyaan xayawaanno cajiib ah milkiile sheegan kaasoo soo bandhiga xaddiga saxda ah ee hoggaanka . Ku habboon bini'aadamka ilaa isgaarsiinta canine waa lagama maarmaan.
Dhererka: 17 - 21 inji (45 - 55 cm)
Miisaanka: 40 - 60 rodol (18 - 27 kg)
bulldog iyo dahab isku dhaf ah
Mammut Bulldog wuxuu sifiican ugu noolaadaa gudaha gudaha qoyskiisa. Si ka duwan noocyo kale oo badan oo Bulldogs ah, Mammut Bulldog ayaa u dulqaadan kara noocyo badan oo qabow iyo heer kul kulul.
Noocan ayaa loo baahan yahay in lagu qaato a socod maalinle ah . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Eeyahaani waxay sida ugu fiican ula shaqeeyaan qoysaska firfircoon waxayna sameeyaan eeyo shaqeeya oo weyn.
Qiyaastii 9 ilaa 11 sano
shih tzu brussels griffon mix puppy
iskudhaf gorgor gorgor cas
Koodhka gaaban way fududahay in la xajiyo. Shanlo oo ku caday burush adag, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Mammut Bulldog waa madadaalo ka mid ah bulldog shaqeeya asal ahaan timo dhaadheer ee 1800's. Maalinta casriga ah Mammut asal ahaan waa xariijin dhiig Jarmal ah oo ka kooban 100% Bulldog oo ay ku jiraan Bulldog Mareykan ah , Bandogge , Ingiriis Bulldog , Olde Ingiriis Bulldogge iyo Bullmastiff .
Hardtails Black Shuck ee Mammut Bulldog eey 10 toddobaad jir
iskudhaf cocker spaniel iyo chihuahua
Mammoths Horse Power Mammut Bulldog oo ah 3 sano jir ka shaqeynaya tababarka ilaalinta
alwaax wolf alaskan malaamute mix
sawirka eey doodle dahab ah
intee le'eg ayay helayaan soo-celinta dahabka yaryar